Oko kudla ukuba iintlungu hypoglycemia?-Diabetes Ithetha-Sinocare
Yintoni oza kuyitya xa uhlaselwa yi-hypoglycemia?
Ixesha: 2019-10-24 hits: 63
Yintoni ukutya esimele sikhethe ukuyinyusa ngokukhawuleza iswekile yegazi xa ihlupheka i-hypoglycemia? Ukutya okuhlukeneyo kunesalathiso se-glycemic eyahlukileyo. Ukutya okunesalathiso se-glycemic ephezulu kubangela ukuba iswekile yegazi inyuke ngokukhawuleza. Phakathi kwazo, eyona nto iphezulu yiglucose (isalathiso se-glycemic yi-100), silandelayo sisonka esimhlophe (88), iswekile (73), isoda yokuqhekeza (72), iswekile emhlophe (65), i-millet congee (62), ijusi ye-orenji (57) ), itshokholethi (49), iJuzi yeapile (41) kunye neCoca Cola (40).
Xa siphethwe kakubi yi-hypoglycemia, asithethi ngokutya okutya okunamafutha amaninzi okanye iiprotein (ezinjenge-ayisikhrim). Kuba amanqatha angenza ukuba i-gastric engasebenzi ihle kwaye inciphise indima ye-carbohydrate, eyenza iswekile yegazi ingakhuphuki ngokukhawuleza ngexesha elifutshane, kodwa inkuthazo ye-hypoglycemia iya kukhokelela abaguli ukuba baqhubeke nokutya ngakumbi ukutya, okukhokelela kulawulo olunamandla lweglucose.
Kufuneka ithathele ingqalelo oko ukuba iziyobisi ze-hypoglycemic zezigulana ziqulatha α-iglucosidase inhibitor (enjengeacarbose, iBasen, njl. njl.) ayongezi amanzi amhlophe eswekile, ijusi yeziqhamo, iibhiskithi, i-bun etshisiweyo kunye nokunye ukutya okunee-disaccharides okanye isitatshi. Kuba la machiza anokuthintela i-carbohydrate kwi-glucose, kwaye ayikwazi ukunyanga ngokukhawuleza iglucopenia. Isigulana emva kokuthatha α-iglucosidase inhibitor kufuneka ikhethe iipilisi zeglucose okanye amanzi eglucose xa kusenzeka hypoglycemia.
Xa i-glucose yezigulana zineswekile ≤I-3.9mmol / L, kufuneka bongeze iglucose okanye ukutya okuneeswekile. I-hypoglycemia enzima kufuneka iqhube unyango olufanelekileyo ngokwazi kunye nemeko yeglue. Xa iswekile yegazi ≤I-3.9mmol / L, ukuba ukuqonda kwakhe kucacile, unokuthatha i-15-20 gram ye-carbohydrate (kukhethwa iglucose); Linda imizuzu eli-15 yokulinganisa iswekile yegazi, ukuba iswekile yegazi isekhona≤I-3.9mmol / L, kwaye emva koko utye iigram ezili-15 zeglucose, ulinganise kwakhona iswekile yegazi, ukuqinisekisa ukuba idlula i-3.9mmol / L. Ukuba izigulana zinokuphazamiseka engqondweni, kufuneka sitsalele umnxeba esibhedlele ngoncedo lonyango. Iigram ezili-15 zeekhabhohayidrethi zingaguqulwa kwezi zinto zilandelayo zokutya: iigram ezili-15 zeswekile (okanye inani elilinganayo leswekile emhlophe, iswekile emdaka), iigram ezingama-20 zobusi, i-200 ml yeorenji yeorenji yeorenji (okanye isixa esifanayo se-cola, i-lemonade ), Iigram ezingama-50 zejusi yeorenji, iigram ezingama-25 zesonka (2/3 iqhekeza lesonka), iigram ezingama-20 zeebiscuits (iziqwenga ezi-3 zamacwecwe esoda) njalo njalo.
Iphepha elidlulileyo: Yintoni esifanele siyijonge kwimidlalo?
Iphepha elilandelayo: Xa ukuzila ukutya kweglucose yegazi kungaphantsi kunesiqhelo ...